"जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर ! लोडसेडिङ सुरु हुन थालिसक्यो" अब पुनः कुलमान चाहियो-विजय लामा - PATRIKA NEPAL
“जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर ! लोडसेडिङ सुरु हुन थालिसक्यो” अब पुनः कुलमान चाहियो-विजय लामा
काठमाण्डौं । नेपाल वायु सेवा निग’मका वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले देशमा लो’डसेडिङ सुरु हुन थालेको भन्दै आ,क्रोश पोखेका छन्।नेपाल विद्युत् प्राधि’करणमा का’र्यकारी निर्दे’शक कुलमान घिसिङ भएका बेला लो’डसेडिङ नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले किन हुन थालेको हो भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
शनिबार बि’हान सामा’जिक स’ञ्जालमा ला’माले ले’खेका छन्, – फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन थालिसक्यो। बिस्तारै समय अवधी बडाउदै जाँदै छ! कारण देखाउदा सुख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्ने गर्छ्न बिद्धुत प्रा’धिकरणको हा’किम साबले!!!के कुलमान घिसिङको पालामा चाहिँ सु’ख्खा याम लागेन अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो? प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाइ??
केही समय पछि फेरि इन्वर्टर (inverter) अनि जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर आउदैनन अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउदैन भन्न सकिन्न!!! यहि चालाले पुर्याउनु समय लाग्दैन।जनता भनेको के हो बुझ्नै गाह्रो भैसक्यो कारण जे पनि चुप लागेर सहने??? हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ जुन देशमा शिर्श नेताहरुलाई झ,गडा गर्नमा नै फुर्सद छैन!! झै झगडा गर्न रोकेर देश बिकाशका काम कुरा पो गर्ने कि?? जय चन्द्र सुर्य!!!
यो पनि,,कांग्रेस सभापति देउवाको यस्तो भनाई:-“प्रधानमन्त्री बन्न ला’लायित छैन तर टाउ’कोमा आए भा’ग्दिन”,,चितवन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि ला’लयित नभएको तर जिम्मेवारी आए पछि नहट्ने बताएका छन्।गिरिजाप्रसाद को’इरालाको ११ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय त’रुण विभागको आयोजनामा चितवनमा भएको युवा तरुण जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न ला’लायित छैन टाउकोमा आयो भने भाग्ने वाला नि छैन।’ कार्यक्रममा सभापति देउवाले जनता नै सबैभन्दा ठूला मालिक भएका र सम्पूर्ण फैसलाको अधिकार पनि उनीहरूसँगै भएको पनि स्पष्ट पारे। त्यस’का लागि पा’र्टीको आन्तरिक मतभेदलाई त्यागेर कार्यकर्ताहरूलाई अघि बढ्न पनि सुझाव दिए। कांग्रेस मिलेर ग’एमा अबको चुनावमा कांग्रेसलाई दुईतिहाइ ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने पनि उनले दाबी गरे।
कार्यक्रममा उनले पार्टीले जनताको मन जित्न कार्यकर्ताहरूलाई जनताको घर-घरमा पुग्न, सुखदुखमा साथ दिन तथा जनताको काम गर्न पनि अह्राए। नेता कार्यकर्ताले कम्तीमा पनि वर्षको तीनपटक जनताको घरमा जानुपर्ने अनि मात्र जनताले पार्टीलाई चुनावमा जिताउने उनले विश्वास व्‍यक्त गरे।
यो पनि,,,२७ लाखमा घर बे’ची श्रीमानलाइ छाडेर बुहारी फरा’र, १०३ बर्षका बृद्ध सासु स’सुराको यस्तो ‘बिजोग अवस्था, रुदै आए(भिडियो),,,काठमाडौ । सायद जि’न्दगीमा यस्ता घट’नाहरु कमै हुन्छन जहा“ बुढा परेका सासु ससुराको बस्ने बासनै उजाडिदिएर बुहारी फरार भएका या भनौ भागेका घटनाहरु । हो आज यस कलियुग समाजको एउटा यस्तै लाजमर्दो घटनाको बारेमा जानकारी दिदैछौ तपाईलाई । यो घ’टना हो काठमा’डौ जोर’पाटीको जहा १०३ बर्षका ससुरा र सासुलाई घर न घा’टको अवस्था पा’रेर बुहारी श्रीमानलाई समेत छाडेर फरार भएकी छिन ।
करिब करिब २७ लाखको हाराहारीमा पर्ने उतm घर बेचेर सबै श्री सम्पती लिएर फरार भएको दान बहादुर कुव“रकी श्रीमती अर्थात सासुले बताएकी छिन । केही दिन य’ता घरमा पनि छोरा बुहारीको राम्रो मेलमिलाप नभएको र दिनदिनै झगडा भईरहेको कुरा पनि सासुले खुलाएकी छिन ।
छोरा बिदेशमा हुदाबाटनै सा’सु र ससु’रालाई निकाल भन्दै दबाब दिएकी बुहारी अचानक गायब भएपछि अहिले परिबार चिन्तामा छन । र सासुससुराले खोज्न हरकोहीलाई गुहारेको पनि बताएका छन । जती गरेनी र खो’जेपछि पनि सि’प नला’गेपछि मिडियामा आएको बताउछन यि दम्पती । यो उमेरमा पनि हामीलाई किन यसरी बिचल्ली पारि बुहारीले सोध्न मन लागेको छ भन्दै आमा रुन थाल्छिन।
← झलनाथ खनालको पनि मिर्गौला फेल ।
राष्ट्रपति सवारीका लागि शीतल निवासदेखि विमानस्थलसम्म सडक खाली →